Zotra an-dalamby: fitaterana solika sy entana no asa goavana sahanin’ny Madarail - ewa.mg
News - Zotra an-dalamby: fitaterana solika sy entana no asa goavana sahanin’ny Madarail
Nanomboka ny taona
2002, noraisin’ny orinasa Madarail ny fampiasana ny lalamby
malagasy tapany avaratra : Antananarivo –Toamasina ;
Moramanga-Ambatondrazaka ; Antananarivo-Antsirabe. Mijanona ho
fananam-panjakana ny fotodrafitrasa, fa ny fitrandrahana azy no
nifanarahana amin’ny Madarail rehefa tsy afaka intsony ny RNCFM
(Réseau national de chemin de fer malagasy).
« Karazana mpindrana ihany
ny Madarail fa tsy tompon’ny lalamby. Mbola misy fandraisana
anjaran’ny fanjakana ny amin’ny fitrandrahana fotodrafitrasa sy
fitaovana navelan’ny RNCFM izay », hoy Rakotondramanana
Lalaina, tale ara-barotra ao amin’ny Madarail. Ao
anatin’izany asa fitaterana izany, ny fikojakojana ireo
fiarandalamby, ny lalamby sy ireo fitaovana samihafa eny amin’ny
toby fitahirizana entana sy gara.
Ny asa lehibe indrindra ataon’ny
Madarail izao dia ny fitaterana
solika sy entana. 70 eo ho eo
ny wagons mitondra solika ( wagons citernes ) avy any
Toamasina ; mitatitra ny voakatry ny fambolena avy amin’ireo
toerana tsy tongan’ny fiara na tsia ; mitondra fitaovana
samihafa fanaovan-trano, toy ny simenitra, avy any ivelany sy
ireo entam-barotra samihafa. Wagons fitatetara kaontenera na
wagons misarona ny hitondrana ireo. Ankoatra izay ny fitaterana
kraomita manomboka eo Morarano Chrome, faritra Ambatondrazaka
mitondra izany hatrany Toamasina. Saingy nijanona izany hatramin’ny
nijanonan’ny Kraomita Malagasy, izay antenaina fa hiverina tsy ho
Mitohy ihany anefa ny
fitateran’olona any amin’ireo toerana lavitry ny lalam-pirenena,
miantoka ny fivezivezen’ny mponina amin’ireo tanàna anelanelan’i
Moramanga sy Ambila Lemaitso. « Tafiditra anatin’ny
bokin’andraikitra ny fitateran’olona tsy tapaka amin’ireny tanàna
ireny », hoy ny tale ara-barotra. Tsy mitondra olona
loatra ny Madarail, Antananarivo-Moramanga na
Moramanga –Ambatondrazaka noho ireo toerana ireo manamorona ny RN2
sy RN44. Ampiharin’ity orinasa ity ny fepetra rehetra hisorohana ny
loza amin’ireo asa fitaterana ireo : Système de Management
de la Sécurité (SMS).
Vakoka eto amin’ny firenena ny
fitaterana an-dalamby. Manamarika izany ireo gara tamin’ny
fiandohan’ny taonjato faha-20 sy ireo lohamasinina tranainy mbola
miasa hatramin’izao. “Tsy namidin’ny fanjakana ireny gara
ampiasain’ny mpandraharaha hafa ireny fa nampanofaina araka
ny fotoana nifanarahana, dia anjaran’ny mpanofa no mikojakoja
amin’ny maha vakoka harem-pirenena azy”, hoy ihany
Rakotondramanana Lalaina. Nomarihiny ihany koa fa
tompon’andraikitra eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Fitaterana
ny Madarail amin’ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa
mahakasika ny tetikasan’ny Fiadidiana ny Repoblika momba ny
fitaterana olona amin’ny fiarandalamby eto Antananarivo sy ny
manodidina. Efa manomboka izao ny asa iarahana amin’ny Colas sy
Sogea, avy eny Ambohimanambola hatreo Soarano.
L’article Zotra an-dalamby: fitaterana solika sy entana no asa goavana sahanin’ny Madarail a été récupéré chez Newsmada.
AFT- Festival des jardins: ho an’ireo mpitia voninkazo
Hotanterahina ny 29 ka hatramin’ny 31 oktobra izao etsy amin’ny Alliance Française Andavamamba ny hetsika Festival des jardins andiany faharoa ho an’ireo mpitia voninkazo sy ny tontolony.Ankoatra ny varotra sy fampirantiana ireo karazana voninkazo, hisy koa ny atrikasa madinika hifampizarana ny fahaiza-manao amin’ny fikoloana zaridaina sy voninkazo mifanaraka amin’ny toetrany.Hisy ny fifampizarana mikasika ny soa entin’ny vonikazo amin’ny maha-olona. Eo koa ny fanentanana indrindra ny tanora hanao fambolena an-tanàn-dehibe. Ankoatra izany ny fanentanana manodidina ny kilalao an-tsary mikasika ny zaridaina…Amin’ity taona ity koa, hisy ny fandraisan’anjaran’ny toeram-piompiana sy fambolena eny Ambohimanga sy etsy Antanandrano mikasika ny fifampizarana momba ny fambolena manaja ny lalàn’ny voajanahary.Ho fantatra mandritra ny ity Festival des jardins ity ny karazana voninkazo manaraka ny toetr’andro mampamelana azy. Ireo vonikazo avo razana toy ny orchidée izay hamidy lafo tokoa. Ankoatra izany ireo karazana zezika sy fikoloana tsara ho fantatra, ny fepetra takian’ny karazam-boninkazo.Efa be mpanao koa izao ny fambolena an-jaridaina ireo karazana hanitra fanao amin’ny sakafo toy ny tongolo maitso, “menthe”, kotomila, “persil”, “célérie”, “basilica”… Ho hita ao anatin’ny hetsika etsy amin’ny AFT Andavamamba avokoa ny fikarakarana azy ireny ao anatin’io telo andro io.Tsikaritra rahateo fa efa betsaka ireo ankohonana mivelona amin’ny fambolena vonikazo sy ny fivarotana izany eny hatramin’ny fanondranana azy manerana ny faritra sy hatrany ivelany mihintsy aza eto Madagasikara.Tatiana AL’article AFT- Festival des jardins: ho an’ireo mpitia voninkazo a été récupéré chez Newsmada.
Fifidianana tany Etazonia: niarahaba ny naha voafidy ny filoha Biden ny filoha Rajoelina
Tsy niandry ela. Niarahaba sy nirary soa ny filoha amerikanina, i Joe Biden, noho naha voafidy azy hitantana an’i Etazonia, ny filoha Rajoelina Andry, ny faran’ny herinandro teo. Nohamafisiny koa ny fiarahabany ny filoha lefitra amerikanina, i Kamala Harris. « Efa taratry ny fandresen’ny vehivavy izany sady voalohany eo amin’ny toeran’ny filoha lefitra. Tantara tsy azo kosehina eo amin’i Etazonia izao fifidianana izao », hoy ny filoha Rajoelina Andry, tamin’izany hafatra sy fiarahabana izany. Noharabainy koa ny vahoaka amerikanina sy ireo andrimpanjakana rehetra amin’izao dingana lehibe vita eo amin’ny demokrasia izao. « Hitombo sy hitohy hatrany ny fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta amin’izao fitantanana vaovao izao », hoy ihany izy.Naneho ny fiarahabana ny filoha vaovao any Etazonia koa ny filoha teo aloha, ny amiraly Ratsiraka. Manantena ny tenany fa hanamafy hatrany ny fifankatiavana eo amin’ny Malagasy sy ny Amerikanina izao fandresena izao.Synèse R.L’article Fifidianana tany Etazonia: niarahaba ny naha voafidy ny filoha Biden ny filoha Rajoelina a été récupéré chez Newsmada.
Ilazana hafainganam-pandeha ny rodorodo famindra. Matetika, ny olo-mahery sy ny matanjaka ny mahavita manao rodorodo famindra fa tsy ho an’ny osa sy ny kely aina. Hita taratra amin’ny fiainam-pirenena ankehitriny koa io teny io. Manao rodorodo famindra ny asa ataon’ny fitondram-panjakana. Tsy miandry ny tsy afaka ary toy ny baolina eny ambony kianja tsy miandry marary fa avoaka ivelany hotsaboina izay maratra.Voatery manao fingana sy daka ambadika ireo very amin’ny rodorodo famindra. Manao izay hampianjera fotsiny ary tsy manana taktika na teknika afa-tsy fanaratsiana tsotra izao. Na izany aza, misy lafiny ratsy ihany ilay rodorodo famindra satria voakitika ny ativilanin’ny valalabemandry. Manao rodorodo famindra ihany koa ny vidim-piainana ka tsy vitsy ireo kofona sy sempotra. Anjaran’ny kapitenin’ny ekipa anefa ny manalefaka kely ilay rodorodo famindra sao sanatria ka ny iray klioba no sasatra mialoha ny fotoana hahataperan’ny fihaonana.Misy koa anefa ireo manao rodorodo famindra, miserana tsy mba manao mbay lalana fa misosososo fotsiny amin’izao, toa zatra manao lalan-dririnina ka lasa mivily any an-kady ilay gadon-tongotra. Ilaina hatrany ny fanarahana baiko na maika hanao rodorodo famindra aza fa tsy handeha hitsambiki-mikimpy na sanatria hanao an’Andriamanitra ho tsy misy. Rodorodo famindra ao anatin’ny fanarahan-damina ny tena filamatra. Banjinina ny eo aloha, todihina ny ao afara mba tsy ho famindra mampidororororo” ny samy namana ka afabaraka eo ny hiafarany.Hain’ny mpitazana hatrany ny manavaka ny rodorodo famindra mankany amin’ny fandrosoana sy ny mihoriram-pandeha na mijaikojaiko famindra ka na manao rodorodo famindra aza, tratry ny miadana foana. Randriamamonjy TorcelinL’article Rodorodo famindra a été récupéré chez Newsmada.
Tavela any ambadibadika any aloha ny fahantrana, ny adilahy politika, sns, fa ny fiadiana ny amboaran’i Afrika eo amin’ny taranja baolina kitra (Can 2019) no maresaka eto amin’ny tanàna. Tsy mbola nisy mihitsy ny Can nalaza toy ity, teto amintsika, satria sambany ny Malagasy no nandray anjara tamin’izany. Vao mainka koa nampivaivay ny fanarahana akaiky ity fifaninanana goavana ity ny fandresena nisesisesy azon’ny ekipam-pirenena.Tsy ankiato ny “Alefa Barea” any anaty “facebook” any, hatramin’ny niandohan’ny fiadiana ny amboara. Ankehitriny aza, araka ny fantatra, lasa nalaza any ampitan-dranomasina any mihitsy io “alefa” io. Misy ny mihevitra fa “teny manan-kery” izany ka mampahomby ny ady. Na inona na inona tokoa moa fahaizan’ireo mpilalao malagasy, raha tsy misy ny fankaherezana toy izany, toa mandringa ihany.Azo tsapain-tanana ary heverina fa iaraha-manaiky ny fientanam-po, indrindra ny alahady alina teo, rehefa nandresy ny ekipam-pirenena nizerianina, ny Barea. Samy mahatsapa fa mpiray ra, mpiray tanindrazana, mpiray firenena no nandresy ka rehareha. Iray fo tanteraka ny Malagasy, hita ny firaisankina, ary angamba, na ireo nisy romoromo sy lonilony teo aloha aza, lasa nihavana noho ny fandresen’ny ekipa iraisana sy nampiray. Heverina fa tsy hijanona hatreo ny fivitranan’ny fihavanana… Sanatria!Nandresy foana, hatreto (inoana fa hitohy izany) ny ekipantsika. Voninahitra iaraha-miloloha izany. Antenaina fa tsy ny eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena ihany no hanehoan’ny Malagasy rehetra izany fa amin’ny sehatra rehetra hisongadinan’ny mpiray tanindrazana. Tsy ho mpisintona ny tafiakatra na ho mpamingana ny nahavita dingana fa ho mpanohana hatrany isika. Tsy hijanona amin’ny “Alefa Barea” fa hitohy amin’ny “Alefa fa samy Malagasy”!Nambaran’ny mpampahalala vaovao, any ivelany any, fa tsy nampoizina ny zava-bitan’ny ekipa malagasy, tamin’ity Can ity. Irariana ny hahazoany ny amboaran’i Afrika. Raha sanatria tsy izany koa anefa, antenaina fa tsy ho “sakaizan’ny mpandresy” isika ka hanakiana sy hanome tsiny. Sa tsy izany? “Alefa … ry Malagasy!”.Landy R. L’article Alefa… ry Malagasy ! a été récupéré chez Newsmada.